Ciidanka amniga Galmudug ayaa maanta soo bandhigay dhisme ay sheegeen inay degganayeen raggii fuliyay weerar Isniintii toddobaadkan lagu qaaday xarun uu Koonfur magaalada Gaalkacyo ka degganaa Waddaad lagu magacaabo Cabdiwali Cali Calmi Yare. Taliye ku-xigeenka Ciidammada Booliska Galmudug,Cabdi Jaamac Cabdulle (Xabeeb) ayaa sheegay in gudaha guriga ay ku arkeen raadad...
Xuutiyiinta dalka Yeman ayaa gacanta ku dhigay doomo u socday magaalada Berbera ee Soomaaliya, kaas oo ay leedahay dowladda Koofurta Kuuriya. Saddex doon oo ku sii jeeday maagalada Berbera ee Soomaaliya ayaa ciidamada Xuutiyiinta ka qabteen xeebaha dalka Yeman meel 15km u jirta. Waxaa ay ka koobanyihiin 16 qof oo labo...
Axmed Maxamed Siilaanyo oo sheegey in dawladda federalka ahi ay faraha kala baxdo arrimaha Somliland hadii kale ay!.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Max'ed Siilaanyo ayaa maanta khudbadiisii sannadlaha ahayd ka hor jeediyay labada gole ee Wakiillada iyo Guurtidda, isagoo khudbadiisa kusoo qaatay qodobo ay ka mid yihiin; siyaasadda arrimaha Dibadda, Wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya, Diiwan-gelinta iyo Doorashooyinka, Qiime-dhaca ku yimid shilinka Somaliland, adkeynta amniga, maamul-wanaaga, garsoorka iyo cadaaladda. Khudbaddaan...
Kulan ay isugu yimaadeen wasiiradda arrimaha dibadda ururka Jaamacadda Carabta oo ka dhacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa lagu cambaareeyay jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, iyagoo dhanka kalena taageeray tallaabadii Sacuudigu xiriirka ugu jartay Iiraan. Guddoomiyaha ururka Jaamacadda Carabta, Nabiil Al-Carabi ayaa ku eedeeyay Dowladda Iiraan inay waddo...